Abaphathi abathathu be-imeyile abaphambili be-iOS | IPhone iindaba
Abaphathi abathathu be-imeyile abaphambili be-iOS
Umphathi we-imeyile namhlanje sisixhobo esibaluleke kakhulu kubantu abaninzi, ngakumbi abo bafumana isixa esikhulu sonxibelelwano ngemini. Nangona kunjalo, isicelo seMeyile esiza ukuba sifakwe ngumzi-mveliso ngokucacileyo asonelanga kwabo banesixhobo esingabalulekanga kwimisebenzi yabo yobungcali kwi-imeyile. Nangona kunjalo, kukho iVenkile ye App ye-iOS uthotho lweendlela ezizezinye esingenakuphuthelwa kuzo ukuba ufuna ukulawula i-imeyile njengomnye umntu, Makhe sijonge abaphathi abathathu be-imeyile abaphambili be-iOS yeendaba ze-iPhone.
Siqala ngeyona ilungileyo kum, kwaye endiyisebenzisayo ngoku. Isitshixo kuNewton kukuba kusefini, ngale ndlela iqinisekisa ukuba uya kufumana zonke izaziso zakho kwaye uya kwenza inxalenye yomsebenzi wakho. Inokudityaniswa okumnandi kunye ne-iOS kwaye ivumela phakathi kwezinye izinto ukusayina kwe-HTML. Nangona kunjalo, inqaku elibi likaNewton, ngaphandle kwesona sicelo sigqibeleleyo, kukuba lifuna umrhumo ohlawulelweyo inokubiza ukuya kuthi ga kwi-49,99 euros unyaka. Kungenxa yoko le nto uNewton eyincomela abo banesixhobo se-imeyile sobungcali.
NgoNewton sinokucwangcisa ukuthunyelwa kwee-imeyile, kwaye sifumane izaziso zokufunda. Isicelo sobungcali esiya kulo msebenzi. Inenguqulo ye-macOS kunye nePC.
Imeyile yaseNewton-iApple ye-imeyileMahala
Ukusetyenziswa kwe Microsoft. Kumangalise wonke umntu ngokonwaba kokusebenzisa, ukukhanya kwayo kunye nendlela ehlaziya ngokukhawuleza ngayo ukubandakanya iindaba zamva nje ze-iOS. Ngaphandle kwamathandabuzo, kwezicelo zolawulo lweposi simahla yeyona ndiyithandayo. Ikwavumela utyikityo lweposi ye-HTML kwaye ibandakanya uninzi lwezinto esizikhethayo kwinguqulelo yewebhu ye-Outlook. Elona candelo lililo kukuba lisimahla.
Spark Mail - Imeyile yokuFunda kwakhonaMahala
Esi sicelo sikwiplatifomu yomnqamlezo, enokuba inomdla ngokwenene. Uyilo olunomdla kunye nomsebenzisi, ngenxa yoko kucetyiswa kakhulu. KukwaSimahla kwi-iOS kwaye sicebisa ukuba uzame ukuba ezimbini ezidlulileyo azikuqinisekisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Abaphathi abathathu be-imeyile abaphambili be-iOS
Ndiyaxolisa kodwa ndiyahluka kweli nqaku ... hayi kuba abo baphathi abalunganga, kodwa ngenxa yokuba i-Airmail kufuneka ibe ngu-EWE okanye u-EWE kolo luhlu ... ndizamile BONKE kwaye i-Airmail iyalingana nabo ukuba ayidluli, kwaye ngakumbi kwi-Outlook.
Akukho mntu ukhumbula i-MyMail (ungayicima intengiso okanye inkxaso ngokujonga iibhanile). Ndinqwenela ukuba bonke abaphathi bezithuba bazikope. Konke okugqibelele
UAlonso de Entrerríos sitsho
Ungayibeki njani i-Airmail? Idlula lee zonke. Ima kancinci ...
Phendula uAlonso de Entrerríos
Bangabaxhasi be-imeyile abalungileyo (ndizamile bonke) kodwa kukho eyona inemveliso kakhulu kwaye yenza umahluko ngenxa yokusebenziseka kwayo, ukusebenza kwayo kunye nobuhle bayo; Le yi-Unibox. Dibanisa ii-imeyile ngumamkeli kwaye wenze imisonto ngokugqibeleleyo.
Ndizamile abathengi abaninzi beposi kwaye, ngaphandle kwamathandabuzo, ndikhetha i-UNIBOX, zombini ze-macOS kunye ne-iOS.
Inqaku elidanisayo ngokwenene ... mandikucacise ...
Ukuqala, ngokubonakalayo, akukho namnye umbhali angena nzulu kwi - ngokuqinisekileyo - ezona mpawu zibalulekileyo zabaphathi bemeyile ze-iOS kwaye zibenza bahluke kumthengi osilelayo weqonga.
Ubugorha obunje: "Abaphathi abathathu be-imeyile abaphambili be-iOS", kwintetho yam, bafuna uphando lwe-DEEP kunye nokuthelekisa phakathi kwamaqonga acetyiswayo, ukuze umbhali aqinisekise abafundi ngeziqinisekiso zakhe, kwaye angahlali ngokupheleleyo "into ebambekayo" yokuthetha okuncinci.
Ndizisekele entweni izimvo zam? Koku kulandelayo:
-Inyaniso yokuba umthengi we-imeyile usefini ayithethi ukuba zonke izaziso ziya kufunyanwa ngenxa yale nto. Umxhasi weposi MAIL uyayenza.
-Umdibaniso omnandi kunye ne-iOS? Umxhasi we-MAIL ngokuqinisekileyo naye.
-Utyikityo kwi-HTML, ucwangcise ukuthunyelwa kwee-imeyile kwaye ufumane izaziso ezifundwayo? Amanqaku akhetha iNewton, kodwa ahlawule i-49.99 yee-euro ngonyaka ngayo?
-Usebenziseka lula, kulula? Imeyile inayo.
- Utyikityo lweposi ye-HTML? Khomba ukuxhasa UKUKHANGELWA
- Simahla? Imeyile isimahla
- Iqonga elininzi? Yalatha i-SPARK.
Uyilo kunye nojongano lomsebenzisi? I-MAIL ayilunganga kwaye inomdla kakhulu. Ukucebisa usetyenziso lokusebenzisa NGOKUQHELEKILEYO kuphela ngenxa yoyilo kunye nonxibelelwano kubonakala kumngcipheko kum.
IBALULEKE KAKHULU! NGAPHANDLE kokuba ndingalufanelekeli olu khetho lubalaseleyo (iliso: UKHETHO) lwabaphathi bemeyile! Ngokuqinisekileyo baneempawu ezininzi kunye nemisebenzi ebenza ukuba banconyelwe kakhulu kubasebenzisi abayifunayo kwaye umbhali ngenxa yokunqongophala kwexesha okanye umnqweno akazange angene kubo ukwenza eli nqaku lixabiseke!
Ndiyabulisa kwaye ndiyathemba ukuba kumanqaku alandelayo izinto ziphathwa ngendlela engcono kunye neengxoxo ezilungileyo!
Kutheni ubeke amanqaku? Bafaka amanqaku obudenge kakhulu bengazi ukuba bathetha ngantoni…. eyona imeyile ilungileyo namhlanje kukude AIRMAIL !!!!!!!!! Ngaphambi kokukopa kunye nokuncamathisa inqaku, yenza uphando lwakho !!!!!!! Kungenxa yoko eli phepha linabafundi abancinci nabancinci! Ukunyanyeka kwamanqaku, apho zingathathi ixesha lokuqinisekisa olo lwazi! newton, ukujonga.spark abaphathi abakhulu ???? HA HA HA HA HA UYA
Kutheni le nto bonke oorhulumente bekhetha iApple ngaphandle kwaseMelika?
Ikhalenda yeVantage, ikhalenda eyahlukileyo yasimahla yexesha elimiselweyo